Filtrer les éléments par date : mardi, 03 mars 2020
mardi, 03 mars 2020 23:06
Antsiranana: Velon’ahiahy ny mponina manoloana ireo sambo vahiny miditra ny seranana
Tonga tao amin’ny seranana ny sambo sinoa ary nampidina kaontenera voalaza fa nitondra fitaovana hanamboarana fotodrafitrasa. Raha ny vinavina dia ho avy hiantsona ao Antsiranana koa ny sambo lehibe Costa, hitondra mpizahatany vahiny maro, amin’ny sabotsy.
Velon’ahiahy ny mponina eo anatrehan’izany, indrindra manoloana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus any Eorôpa sy Chine.
mardi, 03 mars 2020 22:45
Vakinankaratra: Amperin’asa ny Governora vaovao, Vyvato Rakotovao
Tontosa androany talata 03 martsa 2020 teto Antsirabe ny lanonana nametrahana amin’ny toerany ny Governoran’ny Faritra Vakinankaratra Vyvato Rakotovao. Nisy nialoha izany ny fanaovan-tsonia ireo antotan-taratasy fifamindran-draharaha teo aminy sy ny lehiben’ny Faritra Vakinankaratra mpisolo toerana, Rakotomahandry Thimoté izay nitondra an’i Vakinankaratra nandritra ny 11 volana.
Naneho ny fahavononany hampandroso an’i Vakinankaratra ny Governora ary hiroso amin’ny fanoritana ny vinam-pampandrosoana mifaka amin’ny Velirano napetraky ny Filohan’ny Repoblika izay efa nivadika ho Politika ankapoben’ny Fanjakana.
mardi, 03 mars 2020 22:35
Paul Rabary: Tonga ny fotoana hanovana tanteraka ny olona sy ny fomba fiasa eo anivon’ny CENI
Nanao fanambarana tao amin’ny pejiny facebook i Paul Rabary androany, manoloana ny tatitra navoakan’ny CENI ny zoma 28 febroary 2020 lasa teo ka nilaza fa « gaga sy talanjona amin’ireny fanambarana hafahafa navoakan’ny tompon’andraikitra tao amin’ny CENI ireny… ».
« Aoka tsy ho raisina ho kilalao ny fiainam-pirenena fa efa sahirana vao nahita fitoniana teto Madagasikara nanomboka tamin’ny taona 2009 », hoy i Paul Rabary .
« Aoka tsy ny olona tompon’andraikitra sy natokisana hitantana ny fifidianana madio sy mangarahara no hamoa-tsampona ka hilaza fa ny fifidianana izay nokarakarainy dia tsy lavorary ary feno tandrevaka », hoy hatrany izy.
Nahitsy ny tenin’i Paul Rabary fa « tonga angamba ny fotoana hanovana tanteraka ny olona sy ny fomba fiasa eo anivon’ny CENI satria dia manalabaraka ny firenena sy fanaovana tsinontsinona na ny mpifidy na ny mpilatsaka hofidiana ny zavatra sahala amin’ireny ».
mardi, 03 mars 2020 22:20
Coronavirus: Tsy misy tranga ahiahiana eto Madagasikara
Nanomboka ny 25 janoary lasa teo, olona miisa 34 no noraisina an-tanana tao amin’ny hopitaly CHU Anosiala Ambohidratrimo. Ny 4 tamin’izy ireo no noahiahiana ho voan’ny « coronavirus » ka nanaovana ny fizahana sy ny fitiliana ara-pahasalamana rehetra. Hita tamin’izany fa tsy nisy na iray tamin’izy ireo aza nitondra ilay valan'aretina.
Hatreto, olona miisa 28 no efa nivoaka ny hopitaly rehefa natao tamin’ny toerana voatokana nandritra ny 14 andro, ary 9 kosa amin'izao fotoana izao no mbola arahi-maso eny an-toerana.
mardi, 03 mars 2020 22:16
Serge Zafimahova: La CENI remet en cause la crédibilité des élections depuis 2018 à Madagascar
La CENI plonge le pays dans un chaos politique suite à son aveu sur l’existence des doublons par centaine de millier et plus d’un million d’électeurs ayant de numéros de CIN similaires figurés dans la liste électorale utilisée pendant les élections qui se sont déroulées à Madagascar depuis 2018, selon Serge Zafimahova, coordonnateur nationale de la plateforme politique Dinike.
Le Chef de l’Etat Andry Rajoelina et le premier ministre Ntsay Christian ne doivent pas rester les bras croisés face à cette situation, a-t-il dit. Il propose de convier tous les acteurs politiques pour trouver ensemble une issue pour dénouer la situation et préserver la stabilité du pays.
mardi, 03 mars 2020 19:58
3 mars: Journée mondiale de l’audition
mardi, 03 mars 2020 19:46
RMDM: Mitaky ny handravana ny CENI sy ny HCC
Nanao fanambarana ny RMDM (Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara) mitaky ny hanafoanana ireo fifidianana rehetra natao teto Madagasikara, noho ny tsy fahatomombanan'ny lisi-pifidianana araka ny fiekena ampahibemaso nataon'ny CENI.
Mitaky ny hampitsaharana ka hanoloana ny CENI sy HCC ihany koa ny RMDM.
mardi, 03 mars 2020 18:26
Jory Hira Lemoine: Mpilalao voalohany nila ravinahitra tany ivelany mandrafitra ny « Kintana FC »
Mpilalao malagasy renioney i Jory Hira Lemoine. Izy no mpilalao voalohany nila ravinahitra tany ivelany ka mandrafitra ny klioba Kintana FC tarihin’i Lova Ramisamanana.
Efa tao amin’ny Paris Saint Germain (PSG) any Frantsa izy hatraminy U17. Nifindra tao amin’ny Toeram-panofanana kitra an’ny US Orléans nandritra ny telo taona, avy eo dia nilalao tao amin’ny BDX (DH) izy.
mardi, 03 mars 2020 18:06
Razafimahefa Tianarivelo: Mitsipaka ireo tarehimarika navoakan’ny CENI momba ny karapanondrom-pirenena
Azo itokisana ve ny fanambaran’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena momba ny fifidianana na CENI, mikasika ireo olona voarakitra anaty lisi-pifidianana miisa maherin’ny iray tapitrisa manana laharana kara-panondro mitovy ?
Na ny minisitry ny Ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana Razafimahefa Tianarivelo aza miahiahy ny fahamarinan’ilay fanambarana. Nampahatsiahy ny filoha lefitry ny CENI, Rakotonarivo Thierry tamin’io, fa ny ministeran’ny Ati-tany no tomponandraikitra amin’ny kara-panondrom-pirenena. Ary tao Toamasina sy Antananarivo no nahitana ny ankamaroan’ireo laharana kara-panondrom-pirenena mitovy ireo.
Nahitsy ny tenin’ny minisitra Razafimahefa Tianarivelo fa tsy avy amin’ny ministeran’ny Ati-tany ireo tarehimarika navoakan’ny CENI ireo. Ary raha nisy laharana kara-panondro miverimberina dia tokony nampandre mialoha ny tomponandraiki-panjakana avy hatrany izy ireo raha ny fanazavan’ny minisitra.
mardi, 03 mars 2020 10:36